तपाई, हाम्रो परिवारमा कोरोना नहोला भन्न सकिन्छ र ? - NayaNepal News
Home समाचार तपाई, हाम्रो परिवारमा कोरोना नहोला भन्न सकिन्छ र ?
तपाई, हाम्रो परिवारमा कोरोना नहोला भन्न सकिन्छ र ?
धनुषा । जिल्लाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर २ का ३५ बर्षीय विश्वेश्वर यादवले झुण्डिएर आत्महत्या गरे । तर, उनको मृत्युमा समाजको दुर्व्यवहार र सरकारको त्यो निर्णय पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका धेरैले छिःछि दुरदुरको व्यवहार सहनु परेको छ । घरपरिवार, आफन्त र समाजको त्यही दुर्व्यवहार सहन नसकेर प्राण त्यागेका छन् ।
लकडाउन केही सहज भएपछि तत्काल रोजगारी पाइने सम्भावना टर्दैगर्दा उनले घर फर्किने निर्णय गरे ।
उनलाई गाउँकै पर्शुराम तलाउ माविको क्वारेन्टिन राखियो । २६ असार स्वाब दिएका उनलाई कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट साउन १ मा आयो । लगतै नगराइन नगरपालिकाको गांगुली आइसोलेसनमा सारियो । उनले यहाँ १० दिन विताए । लक्षण नभएकाले उनलाई पुनः पीसीआर विधिबाट परीक्षण नगरी १० साउनमा उनलाई घर जान दिइयो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन झलेका उनका लागि यो खुसीको क्षण थियो । तरे सोचे जस्तो भएन ।
स्थानीय अधिकारकर्मी समेत रहेका रजकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वेश्वर परिवार बालबच्चासँग बस्न चाहेका थिए । त्यसका लागि पीसीआर जाँच गराइदिन आग्रह पनि गरेका थिए । तर सम्बन्धित निकायले सुनुवाई नगर्दा उनले आफ्नो प्राण त्यागेका स्थानीयको ओरोप छ । अब भन्नु के तपाई हाम्रो परिवारका सदस्यलाई चाहीँ कोरोना नहोला भन्न सकिन्छ र ? त्यसैले कोरोना जितेर आएका वरपरका जो कोही भएपनि सम्मान गर्न सिकौं ।
Previous articleअलपत्र दुई सय नेपाली स्वदेश फर्किए
Next articleआज २४६ कोरोना संक्रमित थपिए, उपत्यकामा ३१ जना
उपत्यकाका सम्पदा खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएपछि नेपाललाई ठूलो राहत
छुटे १२२ जना चिनियाँ नागरिक, तिरे एक हजार रुपैयाँजरिवाना